XOG: Wasiir Khadiijo oo looga yeeray Xafiiska Ra’iisal wasaare Kheyre – War La Helaa Talo La Helaa
By Xuseen Madoobe	 On Feb 26, 2020
Ra’iisal wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa xafiiskiisa ugu yeeray Wasiirka Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Soomaaliya Marwo Khadiijo Maxamed Diiri oo wax laga weydiinayo sababta ay u diiday iney nidaamka Baaritaanka Fayriska Koroona Virus oo laga hirgeliyay Garoonka Aadan Cadde ee Muqdisho.
Warar hoose oo aan helnay ayaa sheegaya in Wasaaradda Caafimaadka ay dacwad ka dhan ah Wasiir Khadiijo ay u gudbisay Xafiiska Ra’iisal wasaaraha,waxayna ku wargelisay in wixii ka yimaada tallaabadii shalay ay qaaday Wasiir Khadiijo mas’uul ka ahayn Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya oo u xil saaran hubinta caafimaadka dadka ka soo degaya Garoonka Muqdisho.
Ra’iisal wasaare Kheyre ayaa wax ka weydiinaya Wasiir Khadiijo sababta uga booday in laga hubiyo Fayriska Karoona oo fara ba’an ku haaya caalamka,islamarkaana ugu hogaansami weysay amarka Wasaaradda caafimaadka.
Fal-celin kala duwan ayaa ka dhalatay muuqaal lasoo geliyey baraha Internet-ka, kaas oo ay ka soo muuqaneyso wasiirka dhalinyarada iyo cayaaraha Soomaaliya Marwo Khadiija Maxamed Diiriye.
Muuqaalkan ayaa muujinaya wasiir Khadiija oo mar ay kasoo degaysay diyaarad rakaab ah diiday in laga baaro xanuunka Coronavirus oo dunida kusii baahaya, kaas oo dartiis dhaqaatiir caafimaad loo geeyey garoonka Aadan-Cadde in ay ka baaraan qof kasta oo kasoo degaya garoonka, si cudurka uusan dalka usoo gelin.
XOG: Saadaq Joon oo raali gelin ka siiyay CC Shakuur weerarkii askarta looga laayay + Jawaabta la siiyay
FIIRSO: Xasan Daahir Aweys oo u gefay Beel weynta Abgaal kana hadlay shirkii Beesha Mudulood